Ndeapi makuru manhamba pamusika wemasheya? | Ehupfumi Zvemari
Ndeapi makuru manhamba pamusika wemasheya?
Kana iwe uchizoisa mari yako kubva ikozvino, zvichave zviri nyore kwauri kuti urambe uchifunga mupfungwa dzakatevedzana manhamba ayo achabatsira zvikuru Itai kuti vabatsirwe mashandiro pamusika wemasheya. Ivo havangoshumire iwe chete kurongedza kutenga, asiwo kuziva kuti ndeipi nguva yakakodzera kwazvo yekugadzirisa zvinzvimbo. Ivo vanozokupa iwe yakawedzera fungidziro pamusoro pematanho kwaunofanirwa kugadzira aya mashandiro. Uine ruzivo rudiki, iwe uchave unokwanisa kuisa mari uine hukuru vimbiso dzebudiriro kupfuura pakutanga.
Iwe haufanire kukanganwa kuti mamwe manhamba akakodzera kuti ashande mumisika yemari yakakosha kune chero mhando zano. Uye pamusoro pezvose zvakagadzirirwa ma profiles anogona kuunzwa nevadiki vepakati nepakati: vane hukasha, vepakati kana vanozvidzivirira. Mupfungwa iyi, hapana kana zvingasarudzika kana kutadza. Iwe unongo fanirwa kuvaziva kwazvo kwazvo kuti ushandise kubva ikozvino zvichienda mberi. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha kwazvo?
Kana ichi chiri chishuwo chako, mashandiro ako pamusika wemasheya achave inobatsira kudarika kare. Izvo hazvizokudhara iwe chero chinhu, asi mabhenefiti iwe aunogona kuwana akawanda kupfuura iwe zvaunofunga kubva pakutanga. Saka kuti kubva zvino zvichienda mberi, usazeza kutora aya manhamba kune tsika yekugara uchiisa mari. Nekutsungirira kushoma uye nerombo rakanaka, iwe unozowana yakawedzera mari inoyerera account account gore rega. Hazvishamise kuti ivo vanove yakakosha poindi yekutsigira kwako mashandiro.
1 Mifananidzo: pfudzi-musoro-pfudzi
2 Mug ine mubato, mu downtrend
3 Flysheet, iyo yakanaka mamiriro
4 Chivimbiso mureza kana chiratidzo
5 Triangle yakachinjika
6 Denga rakatenderedzwa pamutambo
7 Wedge: shanduko yenzira
Icho chimwe chezvakanyanya kukosha pakutengesa chengetedzo dzakanyorwa muzvikamu. Kusvika padanho rekuti bendekete - musoro - pfudzi (HCH) chiyero chekuona icho iwe chaunogona kuwana pamari yemari yemari machati. Iyo zvakare ndeimwe yeakanyanya kudzidza nevashambadziri vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari. Izvo chaizvo zvinoenderana nenyaya yekutarisira a Shanduko yemaitiro kubva bullish kusvika bearish.
Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemamifananidzo iyo ipa kuvimbika kukuru nekuti mune mashoma zviitiko kuongororwa kwehunyanzvi kuongororwa kazhinji kunokanganisa. Neichi chikonzero chiri chakanyanya kukodzera kugadzirisa zvigaro muzviitiko zvisina kunakira zvaunofarira. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakira chinzvimbo kubvisa kana kudzikisa kurasikirwa mune yako mari chirevo. Dambudziko rega rauchazove naro nderekuona imwe yeakakosha manhamba ayo iwe misika yequity inokupa iwe.
Mug ine mubato, mu downtrend
Pasi pezita rekuda kuziva pane imwe yemamanani anogona chengetedza kuita zvakaipa kushanda stock stock. Icho chimiro chakada kufanana neicho chinonyatso kuzivikanwa seviri pasi, asi nekumwe kupesana kunoita kuti zvisaoneke kune vashoma nepakati varimi. Ndokunge, mipata miviri yakaumbwa, iyo inofanirwa kududzirwa nemazvo kuti isakunyonganisa mukuongorora kwehunyanzvi. Kune rimwe divi, rekutanga iro rinozivikanwa nekuve rakanyanya kuwanda uye imwe gare gare iyo yatove diki uye iyo inoratidza kushomeka kudonha mumutengo.
Inonyanya kushandiswa kuona kana indekisi kana chikamu chemusika wemasheya chingave chinopinda mune ine njodzi downtrend. Izvo zvakaoma kupfuura iyo uriri huviri, asi mukudzoka inopa kuvimbika kwakanyanya kukosheswa nevazhinji vanoita mari. Kunyangwe iwe uchifanira kuve neruzivo rukuru kune dudziro yacho chaiyo. Icho chimiro chisina kujairika mukufamba kwemitengo, asi kana zvikaonekwa vanomanikidza kuti iwe unofanirwa kuita sarudzo yakanyanyisa nezve ako equity mashandiro.
Flysheet, iyo yakanaka mamiriro
Kana paine mufananidzo wekufarira vashoma nevepakati varimari pasina kupokana ndizvo izvi. Nekuda kweayo akajeka ekutsigira anoreva uye kuti anogona kukubatsira iwe kuwana mari yakawanda panguva chaiyo iyo iwe yaunovaona ivo nekristaro yakajeka kujekesa. Nekuti zvirizvo, iro rekupeperesa ndicho chimiro chinokura apo hapana ma resistor kumberi. Ndokureva, iwe une nzira yakajeka yekuenderera uchikwira yakawanda. Kubva pane ino mamiriro, iwe unongofanirwa kurega mutengo wekugovana uchimhanya uye kudzamara chiratidzo chisina kujairika chekushaya simba chikagadzirwa. Izvo zvinogona kukubatsira iwe kuvhara mashandiro kuti unzvese ramangwana matambudziko mune yako mari chirevo.
Iyo yepamusoro yepamusoro ndeye kusimbiswa kwechokwadi kwekuti chengetedzo, chikamu kana index index kuti ienderere mberi nekusimudzira kwenguva yakati. Izvo hazvifanirwe kuumba kutya kwe nzvimbo dzakavhurika zvine hukasha nekuti margin yekukanganisa idiki chaizvo kubva pakuona. Ndokunge, hapana njodzi dzakanyanya pakutenga masheya anoratidza maitiro aya. Kuva imwe yemasisitimu anonyanya kushandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kuita kuti kuchengetedza kwavo kubatsire. Pamusoro pemamwe akaomesesa manhamba mukuumbwa kwavo.
Chivimbiso mureza kana chiratidzo
Imwe yeakanyanya hunhu hunhu hwekuongorora kwehunyanzvi ndiyo mureza mudiki. Hazvishamisi kuti inomiririra chiratidzo chekusimbiswa kwechimiro, kazhinji chinowedzera. Nekudaro, dambudziko rayo hombe mukuliwona iri mune yekuti iro duration ipfupi kwazvo. Nekuti zvirizvo, zvinowanzo gara kwemavhiki mashoma mune akanakisa mamiriro. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei uchifanira kunyatsoteerera kudzidziswa kwavo. Nekuti hazvisi zvisingawanzoitika kuti zvinoenda zvisingaonekwe pazviitiko zvakawanda. Iko chete varimi vane ruzivo rwakanyanya mumisika vanogona kushanda nayo.
Kune rimwe divi, mureza unonyanya kuratidzwa nekukwira kwakanyanya mumutengo wayo uye zvakare nekukwira kamwe kamwe muhuwandu hwezvibvumirano. Izvo izvo zvinoonekwa mumaziso evarimi vane kuenderera mberi nekudzidza mune aya marudzi ekufambisa. Chimwe chezviratidzo izvo zvinogona kukupa iwe chimwe chiratidzo nezve kuumbwa kwayo ndechekuti nzvimbo dzekutenga dzakaiswa zvakajeka kune vanotengesa. Kana zviratidzo izvi zvikapihwa zvazara, unogona kutaura uine chokwadi chizere kuti uri kutarisana nemufananidzo mudiki.
Tiri kutarisana neimwe yeanonyanya kukosha manhamba mune yehunyanzvi kuongororwa kweiyo equities. Asi kune rimwe divi, ndeimwe yeakanyanya kuoma kuona. Kwete mune zvese zviitiko zviri nyore kusvika pamhedziso yekuti tiri kubata nekatatu yakadzoserwa. Kwete zvakanyanya kushoma, nekuti zvinoda kuongororwa kwakadzama kwemamiriro acho ezvinhu. Iko kufamba kunozivikanwa ne kushushikana kwakanyanya mumitengo uye iyo inoteverwa nekupenga kwechisimba. Mune imwe pfungwa kana imwe yacho, saka inogona kuiswa mune ese maitiro.
Iyo katatu inverted, kune rumwe rutivi, zviri pachena mufananidzo uyo zvinoreva kutyora. Pamwe neyakajeka yekubuda kana kune yakatarisana nedivi, ndiko kuti bearish. Kunyangwe seyero yekudzivirira iri nyore kumirira imwe rutsigiro kana kuramba kuramba. Chingave iko kusimbiswa kwetsika, uye sezvatakambotaura, neimwe nzira kana imwe. Iyo rutsigiro inokurudzirwa kwazvo kwenguva pfupi-temu nguva. Nekudaro, pane njodzi yekuti mune mashoma ekutengesa zvikamu shanduko yemafambiro inogona kugadzirwa kubva munzira yekutanga.
Denga rakatenderedzwa pamutambo
Iyi nhamba inofananidzwa nekukwira kwemaitiro uye kuti kubva mukugadzikana kwemitengo inodonha. Ndokunge, iwo maitiro anowira mumutengo wavo. Kusiyana nemamwe manhamba akakosha, mune iyi nyaya vhoriyamu yekutora vanhu haina kujairika. Hapana mamiriro, inogona here kumiririra chiratidzo chakavimbika kwazvo kuti titi takatarisana nedenga rakatenderedzwa. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti nhamba iyi haishande kana ikaumbwa mu lateral hunhu maitiro. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yezvakaomesesa kuongorora nekuda kwekuoma kwekufamba kwayo.
Uku ndiko kufamba kunogona kuve kunonakidza kwazvo, zvese kwekuvhura nekuvhara mashandiro mumisika yequity. Mune zvimwe zviitiko, nekuti unogona kutora mukana we kumusoro gumbo nehunhu hunokosheswa nenhamba iyi. Uye mune vamwe, nekuti ndicho chikonzero chakanakisa chekubvisa nzvimbo dzakavhurika uye kupinda mune yakazara maricho. Neiyi nzira, shingairira kutora mukana wemabhizinesi mikana ayo anounzwa kwauri kubva zvino zvichienda mberi.
Wedge: shanduko yenzira
Iyi nhamba yakafanana zvikuru nezvitatu, asi nemusiyano mudiki kubva kune uyu. Izvo zvinoenderana nenyaya yekuti mitsara inoitora inotora nzira imwechete. Izvo zvakare zvinobatsira kwazvo kungoerekana shanduko mumutengo. Ose ari maviri kubva kune bullish kusvika ku bearish kana kudivi rakapesana. Nekuti pamusoro pezvose zvine kuvimbika kwakanyanya, pamusoro pemamwe manhamba ane hunhu hwakafanana. Izvo zvinokubatsira iwe kuti udzivise mafambiro akaomesesa mukuumbwa kwemitengo yemastock values ​​ari pasi peiyi mamiriro. Kunyangwe ichidawo ruzivo rukuru kubva padanho rekutarisa kwehunyanzvi. Izvo hazvizadzikiswe mune zvese zviitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndeapi makuru manhamba pamusika wemasheya?
Cryptocurrencies, mashandisiro ekushandisa kana kuisa mari mazviri
Chii chinogadziriswa muzvigadzirwa zvekudyara?